आज शनिबार यी तिन चिज देख्नु भएमा तपाइको दिन शुभ हुनेछ ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»आज शनिबार यी तिन चिज देख्नु भएमा तपाइको दिन शुभ हुनेछ !
आज शनिबार यी तिन चिज देख्नु भएमा तपाइको दिन शुभ हुनेछ !
By रिता घिसिंग on ६ आश्विन २०७५, शनिबार ०८:३६ धर्म/दर्शन
एजेन्सी : नेपाली संस्कृति अनुसार शनिबार धेरैजसो धार्मिक कामहरु हुने गर्दछन्। मन्दिरमा समेत त्यस दिन धेरै मानिसहरुको भिड देखिने गर्छ । केहि मानिसहरु भने शनिबार कुनैपनि कार्यका लागि अशुभ हुने भ्रममा परेका हुन्छन र त्यस दिनलाई अशुभ सोचेर नराम्रो घटना हुन्छ भन्ने डरमा हुन्छन । शनिबार के-कस्ता कार्य गर्दा शुभ हुन्छ भन्ने कुरा जानीराख्नुस :
यदि कुनै भिक्षु वा गरीब व्यक्ति शनिबार बिहान तपाईंको ढोका भित्र आउछ वा तपाईंको अगाडि आउछ भने यो शुभ चिन्ह मानिन्छ। तर यदि तपाईंले तिनीहरूलाई डराउनुभयो अथवा गालीगलौज गर्नुभयो भने शनिदेव तपाईबाट टाडा जानेछन् । यस्तो कार्यले तपाइको शुभ कार्यमा पनि बाधा आउन सक्छ ।
यदि तपाइँले शनिवार बिहान कतै सरसफाई गर्दैगरेको मान्छे देखनुभयो भने ,त्यो शुभसंकेत मानिन्छ । यो एक राम्रो चिन्ह पनि मानिन्छ। तिनीहरूलाई कुनै पनि कपडा वा केही रुपैयाँ दिनुहोस्। यसो गर्दा तपाईंका घर बाहिर अधुरा रहेका कामहरु छन् भने ति पुरा हुनेछन् ।
कालो कुकुरलाई शनिदेव को वाहन भनेर चिनिन्छ । तपाइले यदि शनिबारको दिन घरबाट बाहिर निस्किने बेलामा कतै कालो कुकुर देख्नुभयो भने त्यो दिनको लागि तपाइको शुभ संकेत हुनेछ। त्यो कुकुरलाई रोटिमा घिउ लगाएर दिनुभयो भने शनिदेव खुसि भै तपाइको कार्य सफल हुनेछ ।